Nkwụ ụgwọ ekwentị na-aghọ ebe nkịtị na usoro siri ike maka ịmechi azụmaahịa ngwa ngwa ma na-eme ka usoro ịkwụ ụgwọ dịrị ndị ahịa mfe. Ma ị bụrụ onye na-eweta ecommerce na ụgbọ ibu azụmahịa zuru ezu, onye ahịa nwere ndenye ọpụpụ ekwentị (ihe atụ anyị ebe a), ma ọ bụ ọbụna onye na-eweta ọrụ (anyị na-eji FreshBooks maka ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ enyere), ịkwụ ụgwọ ekwentị bụ nnukwu atụmatụ iji dozie ọdịiche ahụ n'etiti mkpebi zuo na n'ezie ntughari. Mgbe mbụ anyị debanyere aha,
Swipely na-enye ụlọ ọrụ usoro ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Na isi, ahia ịkwụ ụgwọ bụ nka nke na-achọ ọnọdụ sitere na data zoro n'etiti azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa n'oge dị ala, ọ na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ụzọ zoro ezo iji jikọọ na ha site na iji data ịkwụ ụgwọ ha. Ndị ụlọ ọrụ na-agbanwe n'elu ikpo okwu Swipely nwere ike ịga n'ihu ịhazi ịkwụ ụgwọ dị ka ọ dị na mbụ, ebe injin Swipely na-egwupụta data na-abịa yana ụdị azụmahịa a
Jide ieslọ Ọrụ Akaụntụ
Tuesday, February 8, 2011 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
M nwere ike ịkọrọ gị ụfọdụ akụkọ egwu na akụkọ ihe mere eme m na ụlọ akụ na kaadị kredit. Offọdụ n'ime ya ekwetala na m kpatara ya mana ọtụtụ n'ime ya bụ omume ịkwa emo nke ụlọ akụ. M na-eche otú ndị a ụmụ okorobịa na-ehi ụra n'abalị… oke uru, bailouts, Executive bonuses na mkpari overage ụgwọ adịghị ọbụna budged ha ka mma ha na usoro. Nke a bụ ezigbo ihe atụ card kaadị akwụmụgwọ azụmahịa m agbanyụrịrị ugboro abụọ ka m na-ejegharị.